सडक सञ्जालले नछुनु एकप्रकारको मानवअधिकारकै हनन् : उपराष्ट्रपति पुन – Saurahaonline.com
सडक सञ्जालले नछुनु एकप्रकारको मानवअधिकारकै हनन् : उपराष्ट्रपति पुन
चितवन, १७ माघ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले २१ औं शताब्दीमा मुलुकका केहि ठाउँमा अझै सडक सञ्जालले नछुनु एकप्रकारको मानवअधिकारकै हनन भएको बताएका छन् ।
“२१ औं शताब्दीको यो समयमा केहीं जिल्लालाई सडक सञ्जालले नछुनु र मानिस हप्तौसम्म हिंड्नुपर्ने बाध्यता रहनु एकप्रकारको मानवअधिकारकै हनन् हो भन्दा कसैले अप्ठ्यारो मान्नु नपर्ला–उनले भने ।”
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको चितवनको रत्ननगर होटल स्टार बैक्युट आयोजित ‘पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन’ उद्घाटन समारोहको उद्धघाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पुनले अबको यातायात क्षेत्र उच्च प्रविधिमैत्री, यात्रुमैत्री, गुणस्तरीय र आकर्षक हुनुपर्ने जोड दिए ।
“अबको सार्वजनिक यातायात यस्तो होस्, की नीजि सवारी चढ्नेहरुले आफ्ना सवारी साधन थन्क्याएर सार्वजनिक यातायातमा सवार होउन् उनले भने समयमा गन्तव्यमा पुग्न पाउन्, सार्वजनिक यातायातका कर्मचारीहरु यात्रुमैत्री होउन् र सार्वजनिक यातायात प्रविधिमैत्री भयो भने पक्कै पनि महंगोमा नीजि गाडि चढ्ने रहर कमैले गर्लान् । ”
उनले यातायात क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको खाँचो रहेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणको दायित्व र सुधारका लागि चाहिने नीतिगत सुधारको काम राज्यकै भएको भनाई राखेका छन् ।
उनले सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र नीतिगत सुधार गर्दै सडक सुरक्षामा राज्यले गम्भीर भएर ध्यान निर्देशन पनि गरेका थिए ।
सडक नपुगेका जिल्ला, ठाउँसम्म सडक पु¥याउने, पुगेको ठाउँमा कालोपत्रे गरेर स्तरीय बनाउने, राजमार्गको विस्तार तथा मर्मत गर्ने सबै काम राज्यले समयमै गर्न सरकार सुझाव समेत दिए
“हाम्रो लागि सडक यातायातको विकल्प छैन । जलमार्गको सम्भावना देखिदैन भने रेलमार्गका लागि केहीं वर्ष कुर्नैपर्ने देखिन्छ उनले भने । हवाई मार्ग आफ्नो गतिमा निरन्तर चलिरहन्छ । आममानिस भने सार्वजनिक यातायातमै निर्भर छन् । यसकारण पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारको खाँचो छ ।”
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघद्वारा मिति २०७४/१०/१७ गते चितवनमा आयोजित
‘पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन’ उद्घाटन समारोहमा
सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ज्यूबाट व्यक्त हुने
कार्यक्रमका अध्यक्ष यातायात व्यवसायी महासंघका कावा अध्यक्षज्यू,
टे«ड यूनियनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरु,
मजदूर संगठनका अध्यक्षज्यूहरु,
यातायात व्यवसायी साथीहरु,
उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द
देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको ‘पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोह’को अवसरमा देशभरका यातायात व्यवसायीहरुमाझ उपस्थित हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । म पर्यटकीय क्षेत्र चितवनको यो टाँडीमा आयोजित यातायात व्यवसायी महासंघको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै, यस अवसरमा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र यातायात व्यवसायीहरुमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु ।
हाम्रो देशको यातायातको मेरुदण्ड सडक यातायात नै हो । यस क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य सफलता हाँसिल गरेका पनि छौँ । देशका ७५ जिल्ला सडक यातायात सञ्जालले जोडिएका छन् । अधिकांश गाउँ सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । सरकारी तथ्याङकअनुसार देशभर करिब ७३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएका छन् ।
सडक यातायातको माध्यामले मानिसको दैनिक जीवन सहज बन्दै गएको छ । एक दशकअघिसम्म अधिकांश जिल्लामा गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न घण्टौँ हिंड्नुपर्दथ्यो । तर, आज अधिकांश गाउँका मानिस सडक सञ्जाल निर्माण र यातायात सेवाको विस्तारले केहीं घण्टामै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सक्ने बनाएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो ।
नेपालको सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा नीजि क्षेत्रको भरमा चलिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा नीजि क्षेत्रको झण्डै पाँच खर्ब रुपियाँको लगानी देखिन्छ । यातायात क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो, जसले राज्यलाई अग्रीम कर तिर्दै आएको छ । विभिन्न प्रकृतिका करिव ४ लाख सार्वजनिक सवारी साधनहरुले देशभर यातायात सेवा संचालन गर्दै आएको र करिव २० लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
यसबाट हामी निशंकोच भन्न सक्छौँ, सार्वजनिक यातायात क्षेत्र एउटा उद्योगको रुपमा स्थापित भईसकेको छ । म नेपालको यातायात क्षेत्रको विकासका लागि योगदान पु¥याएकोमा नीजि क्षेत्र, विशेष गरी यातायात व्यवसायीहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले देशको जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि दिईरहेको सेवा उच्च प्रशंनीय छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नहँदा सवारी साधनहरुको सिसामा जाली लगाई चालकले हेल्मेट लगाएर गाडि गुडाएर दिएको सेवा सामान्य कुरा होइन । म यातायात व्यवसायी र चालकहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
पछिल्लो समयमा यातायात क्षेत्रमा तिव्र प्रतिस्पर्धा छ । लामो दुरीका सडकमा प्रविधिमैत्री सुविधासम्पन्न गाडि गुड्न थालेका छन् । यो हाम्रा लागि उपलब्धी हो । यो उपलब्धी गौरव गर्न लायक छन्, तर सन्तोषजनक भने छैनन् । २१ औं शताब्दीको यो समयमा केहीं जिल्लालाई सडक सञ्जालले नछुनु र मानिस हप्तौसम्म हिंड्नुपर्ने बाध्यता रहनु एकप्रकारको मानवअधिकारकै हनन् हो भन्दा कसैले अप्ठ्यारो मान्नु नपर्ला ।
अर्कोतिर विभिन्न राजमार्गका अवस्था जिर्ण छन् । पाँच महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने निर्माण तथा मर्मत कार्य पाँच वर्षसम्म पनि पूरा नहुने बेथिति विद्यमान छ । अधिकांश सडक मापदण्ड विपरित, धुलाम्य र गुणस्तरहिन छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । मापदण्ड विपरितका अप्ठ्यारा सडक, थोत्रा सवारी साधन, चालकको लापरबाहीका कारण सडक दुर्घटना डरलाग्दो गरि बढीरहेको छ । सडक दुर्घटनामा वर्षेनी सयौँ नागरिकको ज्यान जानु ज्यादै नै चिन्ताको विषय हो ।
यातायात क्षेत्रमा असंख्य समस्याहरु छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा तपाईं यातायात व्यवसायी साथीहरु पनि परिरहनुभएको छ । लामो तथा छोटो दुरीमा यात्रा गरेका अधिकांश यात्रुहरुले कष्टकर यात्रा गरिरहेका छन् । साँघुरा सडक, समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा मुख्य राजमार्ग अलपत्र हुँदा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको कम्जोरीका कारण नागरिकहरुको घण्टौँ समय ट्राफिक जाममा खेर गईरहेको छ ।
अर्कोतिर समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा नियमित काममा व्यवधान आईरहेका छन् । दिनमा पचास हजार मानिस ५ घण्टामात्रै जाममा पर्दा राष्ट्रलाई कति घाटा पर्छ ? जाममा परेका मानिसलाई कति घाटा पर्छ ? हामीले अझ यसतर्फ ध्यान दिएका छैनौँ । यसतर्फ हामीले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्नेछ ।
यातायात क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको खाँचो छ । पूर्वाधार निर्माणको दायित्व राज्यको हो । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि चाहिने नीतिगत सुधारको काम राज्यकै हो । सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र नीतिगत सुधार गर्दै सडक सुरक्षामा राज्यले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्दछ । सडक नपुगेका जिल्ला, ठाउँसम्म सडक पु¥याउने, पुगेको ठाउँमा कालोपत्रे गरेर स्तरीय बनाउने, राजमार्गको विस्तार तथा मर्मत गर्ने सबै काम राज्यले समयमै गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो लागि सडक यातायातको विकल्प छैन । जलमार्गको सम्भावना देखिदैन भने रेलमार्गका लागि केहीं वर्ष कुर्नैपर्ने देखिन्छ । हवाई मार्ग आफ्नो गतिमा निरन्तर चलिरहन्छ । आममानिस भने सार्वजनिक यातायातमै निर्भर छन् । यसकारण पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारको खाँचो छ ।
अबको यातायात क्षेत्र उच्च प्रविधिमैत्री, यात्रुमैत्री, गुणस्तरीय र आकर्षक हुनुपर्दछ । अबको सार्वजनिक यातायात यस्तो होस्, की नीजि सवारी चढ्नेहरुले आफ्ना सवारी साधन थन्क्याएर सार्वजनिक यातायातमा सवार होउन् । समयमा गन्तव्यमा पुग्न पाउन्, सार्वजनिक यातायातका कर्मचारीहरु यात्रुमैत्री होउन् र सार्वजनिक यातायात प्रविधिमैत्री भयो भने पक्कै पनि महंगोमा नीजि गाडि चढ्ने रहर कमैले गर्लान् ।
सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सरकार र नीजि क्षेत्र दुवै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । झण्डै पाँच अर्बको लगानी रहेको र लाखौंलाई रोजगारी दिएको यस क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने यहाँहरुको माग जायज छ । तपाईं यातायात व्यवसायीहरुको मात्रै होइन हरेकको लगानीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यहाँहरुले अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण, दक्ष चालकका लागि प्रशिक्षण प्रतिस्ठानका कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ । म यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नैतर्फ गर्नुपर्ने सुधारका काम पनि थुप्रै छन् । भाडा महंगो भयो, सार्वजनिक यातायात यात्रुमैत्री छैनन् भन्ने जस्ता जनगुनासाहरु बेला बेलामा सुन्नमा आईरहेका छन् । यस क्षेत्रमा देखिएका अस्वस्थय प्रतिस्पर्धाको असर यहाँहरुलाई नै पर्न गईरहेको छ । म यहाँहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
मलाई विश्वास छ, यहाँहरुको यो महाधिवेशनमा यातायात क्षेत्रको सुधारका तमाम विषयमा गहन छलफल हुनेछ । देशको सार्वजनिक यातायातको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघको महाधिवेशनमा यातायात क्षेत्रका समस्या, चुनौती र समाधानका बारेमा हुने छलफल तथा निष्कर्ष राष्ट्रकै लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । यातायात क्षेत्रका सम्भावनाको खोजी तथा चुनौतीको सामना गर्न यहाँहरुले ठोस् कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु ।
हाम्रो देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ अग्रसर छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेशहरुमा सरकार निर्माणको तयारी भईरहेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ र निर्वाचनलगतै संघीय सरकार गठन हुनेछ । अब हामी सबैको ध्यान देशको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि यातायात क्षेत्रको अझै उल्लेख्य योगदान रहनेछ । जसरी अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपि)मा १० प्रतिशतको योगदान दिईरहेको छ, आगामी दिनमा थप बढ्ने अपेक्षा लिएको छु । साथै, यस महासंघका कावा अध्यक्ष डोलनाथ खनालजीले राख्नुभएका धारणासहित यातायात व्यवसायीहरुको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
अन्त्यमा, मलाई यो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा नेपाल यातायात व्यवासायी राष्ट्रिय महासंघलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहान्छु । महाधिवेशन सफलताको शुभकामनासहित अब आउने महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई अग्रिम बधाई दिन चाहान्छु ।